Sony manemotra ny fandefasana ny headphones Platinum ho an'ny PS4 | Vaovao momba ny gadget
Sony manemotra ny fandefasana ny headphones Platinum ho an'ny PS4
Manohy manao bingo amin'ny fahatarana izahay. Andro vitsivitsy lasa izay dia gaga izahay fa nofoanana tanteraka i Microsoft Scale Hiainga, ny filokana tokana mafy indrindra natokana ho an'ny Xbox One. Androany dia tsy maintsy miresaka momba ny fanemorana isika, tsy fanafoanana izany, fa azo inoana fa mety hampahatezitra mpampiasa mihoatra ny iray ihany koa izany. Ary moa ve ny Sony's Platinum Wireless Headset dia nahemotra tamin'ny fandefasana azy ireo tany Etazonia tsy nisy fampandrenesana mialoha. Ireo headphones ireo dia napetraka ho iray amin'ireo sandan'ny vola tsara indrindra ho an'ny console an'ny orinasa Japoney izay tsy isalasalana fa ho lasa lohan'ity taranaka ity.
Ary i Sony dia tsy mijanona manana olana amin'ireo karazan-telefaona ofisialy ho an'ny PlayStation 4. Voalohany no ahitantsika ny Silver, fanontana izay tsy namidy tany Eropa (raha tany Etazonia), noho ny firafiny mazava. tsy fahampiana. Tsy azo natao mihitsy ho an'ny headphones ny tsy hijaly noho ny fahatapahan'ny fehiloha ambony na eo aza ny zava-misy fa avo lenta ny headphone. Manohy manao bingo amin'ny Gold izahay, headphones amin'ny vidiny ambony tsy azo iadian-kevitra, ny tsara indrindra azontsika atao amin'ny finday amin'ny PlayStation 4, izay hodinihintsika ato tsy ho ela eto amin'ny Actualidad Gadget.
Fa androany dia miresaka momba ny Platinum, headphone izay fidirana an-tsehatra amin'ny fitaovana avy amin'ny Sony's Wireless Wireless Headset. Ireo headphones ireo dia misy fanamafisana vy amin'ny fehikibo farany ary misafidy headphone rakotra polikarôbonaly voadinika. Mazava ho azy fa ambony kokoa ny vidiny. Raha amin'ny resaka audio dia manohy ny virtualization manodidina ny 7.1 izahay, famaritana mitovy amin'ny Gold izay manolotra kalitao tsy manam-paharoa raha ny PlayStation 4 no resahina noho ny fahaizany manokana. Orinasa toa an'i Walmart na BestBuy no manana nahemotra tsy voafetra ny fandefasana ireo headphone izay tokony ho tonga tamin'ny 16 janoary ireto manodidina ny 180 euro. Tsy fantatsika raha toa ka hisy fiantraikany amin'ny fahatongavany any Eropa mandritra ny volana febroary ny habetsaky ny fahatarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Sony manemotra ny fandefasana ny headphones Platinum ho an'ny PS4
Fananana na toerana
Omaly lalao vitsivitsy sy kojakoja androany ho an'ny Nintendo Switch
Samsung dia mandefa Android Nougat 7 ho an'ny S7 sy S7 Edge